Izibonelelo zejinja: Olunye lolungiso lweNdalo oludala Amadoda aQinisekileyo
UMiguel Serrano | | Kufanelekile, Ukutya
Izibonelelo zejinja zivakala kwiindawo ezininzi zomzimba. Ayibangelwa lithuba lokuba le ngcambu, ekwanika incasa kwizidlo zakho, yiyo Olunye lolungiso ezindala kakhulu emhlabeni.
Ngembali yakudala, ijinja kukutya okucetyiswayo ekutyeni kwakho. Ezi zilandelayo izibonelelo ezintle onokuzifumana xa usongeza kwizidlo zakho, izibonelelo ezibonakalayo ngaphakathi nangaphandle.
1 Ukulwa izifo
1.1 Ally ngoncumo lwakho
2 Iphucula ukwetyisa
2.1 Yintoni oyithathayo kubanda
3 Ukudambisa iintlungu zemisipha
3.1 Kwaye intloko
4 Nciphisa icholesterol
5 Ikhusela izifo
5.1 Ukulwa nomhlaza?
5.2 Ukutya okuchasene nomhlaza
Kuhlala kunomdla ukongeza ukutya okuchaseneyo nokutya, kwaye ijinja yenye yezona zibonakalisiweyo. Ngokophando, ukutya ijinja entsha kunokukunceda ekulweni nosulelo. Kuyabonakala, Inezinto ezininzi ezenza ukuba iintsholongwane zingabikho.
Ally ngoncumo lwakho
Umtsalane wamadoda ikakhulu usekwe kwizinwele noncumo. Banike ingqalelo ebafaneleyo kwaye uya kufumana umfanekiso owomeleleyo. Ijinja ayinakukunceda ubuyise iinwele zakho, kodwa inokukunceda ugcine amazinyo akho ekwimeko elungileyo. Ibacteria inokuhlala emlonyeni kwaye ibangele usulelo lweentsini, kodwa ijinja, ngenxa yeempawu zayo zokulwa neentsholongwane, ziyalwa nazo ikhusela esinye sezona zixhobo zibalaseleyo zomntu: uncumo.
Ijinja yindibaniselwano yenkqubo yokwetyisa, ngoko unokuyisebenzisa —ngakumbi ukuba ukhetha amayeza endalo kunamayeza-- xa unayo nayiphi na ingxaki, njengokugaya isisu, irhasi, okanye isicaphucaphu.
Ukunyanzelwa kunye negesi kunokukubetha kwelona xesha lingafanelekanga, rhoqo emva kwesinye sezidlo ezinzima ongenakukwazi ukusala. Kodwa abantu abaninzi banengxaki yokufumana isisu esingapheliyo. Ukongeza ekuncedeni ukuba ukhulule iigesi eziqokelelwe emathunjini, ijinja nayo ihlala inika iziphumo ezilungileyo xa kuziwa kuyo ncedisa ukutya kuhamba ngendlela yakho kwaye ungabambeki esiswini sakho kukunika ingxaki.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ikwasusa isicaphucaphu, ke lolukhetho ekufanele ukuba uluthathele ingqalelo xa ungaziva uziva kakuhle ngenxa yohlobo oluthile lokugula.
Yintoni oyithathayo kubanda
Jonga eli nqaku: Unyango olubandayo. Apho uyakufumana iingcebiso eziluncedo ekunciphiseni iimpawu ezibandayo kwaye wenze le nkqubo ingonwabisi inyamezeleke ngakumbi.
Ukudambisa iintlungu zemisipha
Ngaba uyazi ukuba ukutya okusichaphazelayo ngeli xesha kunokukunceda ukunciphisa iintlungu zemisipha? Izibonelelo zayo ezichaseneyo nokudumba zinamathuba amaninzi. Enye yezona zinto zinomdla yile inxulumene noqeqesho: xa unengxaki yokungakhululeki kwezihlunu (into exhaphake kakhulu, ngakumbi kwezona ndlela zifunwa kakhulu) phakathi koqeqesho olunye nolandelayo, cinga ngokuthatha ijinja encinci ukuze iintlungu zingakuthinteli ukwenza. ubuninzi.
Wonke umntu uyabethwa ngu intloko kanye ngexeshana, kwaye ngaloo mizuzu yokuba nejinja encinci akuyi kukwenzakalisa. Inyaniso, oku kutya kunokunciphisa ezo ntloko zicaphukisayo nezingamkelekanga ezikuthintela ekuphuculeni indlela yesiqhelo ngendlela eqhelekileyo.
Ikholesterol sesoyikiso sihlala silindele ukuphela kokutya okungenampilo. Kodwa, ngethamsanqa, kukho into enokwenziwa ukunqanda loo meko: ibandakanye kwisidlo sakho ukutya okunciphisa i-cholesterol. Ewe, ngokophando, ijinja yenye yokutya, ukunika iziphumo ezilungileyo xa kuziwa ekwehliseni i-cholesterol ye-LDL okanye i-cholesterol embi. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kubalulekile ukuyithatha rhoqo ukuze uqaphele izibonelelo zayo.
Izibonelelo zejinja aziyi kukwenza ungafi okanye zikusindise ekuguleni, ngelishwa, kodwa zilungiselela umzimba wakho ukulwa ngcono izifo ezinganyangekiyo, esele ininzi. Ngenxa yoko, ukongeza ijinja kwisicwangciso sakho sokutya kunciphisa amathuba oxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye isifo sentliziyo. Imfihlo kukutyeba kwayo kwii-antioxidants, ezithatha inxaxheba kwimisebenzi ebalulekileyo yomzimba, kubandakanya ukukhuselwa kwe-DNA.. Ngokwendalo, ukufumana okungcono kuyo kufuneka ukudibanise nokutya okusempilweni kunye nokuzilolonga rhoqo.
Iindidi ezithile zomhlaza, kubandakanya nomhlaza wedlala lobudoda, zinokucothisa ukukhula kwazo ngenxa yejinja. Nangona kunjalo, esi sisihloko esinzulu kakhulu, ke nangona kunomdla ukwazi malunga nokutya okunesibonelelo sokulwa nomhlaza, kubalulekile ukuyithatha ngononophelo kwaye ungayeki ukuxhomekeka kunyango.
Izifundo ezikhulu ziyafuneka ukuze kuqondwe ngcono ubudlelwane bayo ne-Alzheimer's (isifo esinokulwa nejinja)kunye namanqanaba eswekile yegazi kunye nendlela umzimba osebenzisa ngayo i-insulin, enokuthi iphucule ngokusetyenziswa kwejinja.
Ukutya okuchasene nomhlaza
Jonga eli nqaku: Ukutya okuchasene nomhlaza. Apho uyakufumana into yokutya ukonyusa amandla e-anticancer ekudleni kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Izibonelelo zejinja